अन्टिसँग सुतेको // 18+ // Nepali Stories - Nepali Sex Tube
अन्टिसँग सुतेको // 18+ // Nepali Stories
एक दिन दिउँसो ३ बजे तिर घरमा आन्टी , रबीन र म मात्रै थियौ । बहिनी सबिता ( रबीनको बहिनी) बाहिर साथीसँग घुम्न गएकी थिई । रबीन हेलमेट लाएर कोठाबाट निस्कियो अनि भन्यो “कपिल जाँउ , एक छिन भक्तपुर सम्म पुगेर आउँ । एकजना साथी आको छ रे बिदेशबाट भेट्न बोलाको छ ।” मनमनै सोँचे आज आन्टीलाई दिउँसै चिक्नु पर्यो अनि भने “मलाई अलि सञ्चो नहोला जस्तो छ , जीउ भारी भई राछ , टाउको पनि दुख्ला जस्तो भाछ , तिमी गएर आऊन , म घरमै आन्टी सँगै बसौला , फेरि बहिनि पनि छैन ।” रबीनले भन्यो “ए ए , त्यसो भए म गएर आउछु नि त , तिमी आराम गर्दै गर । मलाई भरै खाना नकुर्नु है , आज उतैबाट खाएर आउँछु ।” रबीनको यो कुरा सुनेर मलाई “ढुंगा खोज्दा देउता” मिलेझै भयो । घरमा बहिनी पनि नभाको , रबीन पनि ढिला आउने , आन्टी र म मात्रै आज चै मजाले दिउँसै चिक्न पाईने भो भन्ने सोँचे । “ल ल , छिटो आउन त है , म घरमा नै हुन्छु ” मैले भने अनि रबीनसँग गेट सम्म गए । रबीन मोटरसाईलक स्टार्ट गरेर हुइकियो भक्तपुर तिर , अनि म पनि हतार हतार घर भित्र छिरे अनि आन्टीलाई च्याप्प समातेर किस गर्न थाले । चोलो बाहिर बाटै आन्टीको दुध माड्दै दाहिने हातले सारी उचालेर पुती खेलाउन थाले ।
आन्टी पनि जोशमा आउनु भयो र मलाई किस गर्न थाल्नु भयो । जोशै जोशमा हामीले टी.भी. कोठामानै पुरै लुगा खोलेर नांगो भयौ अनि फेरि चुस्ने चाट्ने काम शुरु गर्यौ । आन्टीलाई भुईमै सुताएर म चिक्न थाले , आन्टी पनि तलबाट धक्का दिन थाली । जोशमा होश हराउँदै हामी चिक्नमै ब्यस्त भयौ । होश हराउँदा ढोका बन्द गर्न भुलेछौ । अचानक “आमाऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽ , कपिल दाईऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽ के गरेको यस्तो ? छ्या छ्या छ्या ………… हेर लाजशरम नभाको” भन्ने आवाज सुनेर हामी झस्कियौ । हतार हतार उठेर हेरको त बहिनी सबिता हाम्रो अगाडी मुख छोपेर रुँदै थिई । मेरो होस हवासै उड्यो , केहि भन्न सकिन , हतार हतार लुगा लगाए अनि बाथरुम तिर छिरे । बाहिर बहिनी रुएको प्रष्टै सुनिन्थ्यो । आन्टी बहिनीलाई के के भनेर सम्झाउँदै हुनुहुन्थ्यो । म त्यतीकै बाथरुममै बसी रहे , मन मनै सोँचे , अब कसरी मुख देखाउने बहिनीलाई । साथीले पनि थाहा पायो भने त बर्बादै हुन्छ , झन अंकलले थाहा पाउनु भयो भने त आन्टीको जिन्दगीनै बर्बाद हुन्छ । मनमा नानाथरीका कुरा हरु खेल्न थाल्यो , मन म धेरै डर पलाएर आयो ।
एकछिन पछी बहिनीको रुवाई बन्द भयो जस्तो लाग्यो अनि म बिस्तारै बाथरूम बाट बाहिर निस्के । सबिता घोप्टिएर सोफामा बसी रहेकी थिई अनि आन्टी उसकै छेउमा चुपचाप बसीरहनु भएको थियो । म पनि बिस्तारै सोफामा बसे चुपचाप । “ल ल तिमी चिन्ता नगर , मैले सबिता सँग कुरा गरीसकेको छु , यो कुरा हामी ३ जनाको बिचमा मात्रै रहोस ” आन्टीले भन्नु भयो । मन हलुका भएर आयो , कता कता लामो सास फेर्दै आनन्द महसुस गरे । “तिमीहरू दुबैजना बस्दै गर है , म चिया बनाएर ल्याउँछु” आन्टी उठ्दै भन्नु भयो । हामी दुबैजना चुपचाप सोफामा बसी रह्यौ । एकछिन पछि आन्टी चिया लिएर आऊनु भयो र हामी चिया पिउन थाल्यौ । म घरी घरी सबितालाई हेर्थे , सबिता घोप्टो परेर बसीरहेकी थिई । कता कता अझै मनमा डर पलाएर आयो , अनि आँट गरेर सबितालाई सोधे “कहाँ पुगेर आको तिमी सबिता?” “यसो साथीहरूसँग बजार गएर आको , अलि अलि सामान पनि किन्नु थियो ।” उनले घोप्टिएरै जवाफ फर्काई । “के के किन्यौ त ?” मैले फेरि सोधे । “जाडो लाग्न थाल्यो , त्यै भएर ट्राउजर , अनि बाक्लो टी-शर्ट किनेको , अनि मोजा पनि । एउटा ब्याग पनि किन्न लागेको , किनिन , कस्तो महंगो ? २००० रे त्यो जाबो ब्यागको” उनी अलि सहज हुँदै जवाफ दिन थाली । “हो र , अनि किने भा भई हाल्थ्यो नि त” मैले भने । “कहाँ किन्नु , गोजीमा जम्मा १००० उब्रेको थियो” उनले भनी ।
“ए , त्यै भएर पो , ल ल म किनिदिउँला तिमीलाई त्यो ब्याग” मैले उनलाई फकाउने हेतुले भने । “साँच्ची किनिदिने हो मलाई ? साँच्ची हो ? नढाँटी भन्नु त ?” उनले उत्सुक हुँदै भनी । “हो हो , ल जाउँ न त नजिकै छ भने , अहिले नै किनिदिन्छु ” मैले तरन्तै जवाफ फर्काए । “जाने हो भने जाउँ न त , ट्याक्सी चढेर जाउँ न त हुन्छ ?” उनले सोधी । “ल ल हुन्छ जाउँ , पर्ख है त म कपडा फेरिहाल्छु ” भन्दै म कपडा फेर्न कोठा तिर लागे । कपडा फेरीओरी आउँदा आन्टीले चिया पनि ल्याईसक्नु भाको रैछ अनि हामी चिया खान थाल्यौ । “सुन्नु भयो आमा, मलाई कपिल दाईले ब्याग किनिदिने रे , कस्तो राम्रो छ मैले हेरेको ब्याग , २००० पर्ने । मेरो सबै साथीले आँखा लाको छ त्यो ब्यागमा । मैले भोलि त्यो ब्याग बोकेर गए भने त सबैको आँखा जल्छ” सबिता खुशी हुँदै आन्टीलाई सुनाउन थाली । “भई गयो नि त, अब तलाई दाईले किन्दिने रे त , किने भई हाल्यो नि त । अहिले छिटो गएर छिटै आउनु नि फेरि है , राती चिसो बढी सक्यो बिरामी होला नि ” आन्टी ले भन्नु भयो । “ल ल , हामी निस्केको अब” भन्दै हतार हतार चिया खाएर हामी निस्कियौ । बाटोबाट ट्याक्सी लिएर हामी न्यु रोड गयौ अनि सबिताले “उ त्यो पसलमा छ मैले हेरेको ब्याग” भन्दै बाटो काट्न थाली । म पनि उनको पछी पछी गए । पसलमा छिरे पछि उनले झण्ड्याईएको झोला निकाल्न लगाई ।
पहिलो यौन सम्पर्क अनुभब //18+ // Nepali Story
पहिलोपल्टको सम्भोग // 18+ // Nepali Stoeies